Wararka - XYTOWER |Waa maxay sababta u dooratay Qaab-dhismeedka Birta ee Taawarada Korontada?
XYTOWER |Waa maxay sababta u dooratay Qaab-dhismeedka Birta ee Taawarada Korontada?
Dadka aqoonta u leh warshadaha tamarta ayaa taas ogqaab dhismeedka birtawaxay door muhiim ah ka ciyaartaa wax soo saarka warshadaha.Waayahaan, qaab dhismeedka birtu waxa uu u badan yahay qaab dhismeed, kaas oo loo qaybin karo shan nooc: qaab-dhismeedka birta fudud, qaab-dhismeedka birta dhaadheer, qaab-dhismeedka birta la deggan yahay, qaab-dhismeedka birta ee bannaan iyo qaab-dhismeedka birta buundada.Shahaadada injineernimada ee dhismayaasha birta ah waa mid aad u sarreeya, qodobka nabdoonaanta sidoo kale waa mid aad u sarreeya, waxaana si dhakhso ah loo soo ururin karaa.
Haddaba maxay tahay sababta saamiga codsiga ee qaab-dhismeedka birta uu ka sarreeyo kan alaabta kale ee cayriin?Qaadashada munaaradda korantada ee caadiga ah tusaale ahaan, qaab dhismeedka birta ayaa guud ahaan loo doortaa sida alaabta ceeriin marka la dhisayomunaaradda khadka gudbinta.
Khubarada qaar ayaa sheegaya in sababta qaab dhismeedka birta loogu xushay alaabta ceeriin ee munaaradda korontada ay tahay sida soo socota:
1. Qaab dhismeedka birta wuxuu leeyahay saameyn kuleyl ah.Habka dhismaha ee munaaradda korantada, isticmaalka qaabka birta ayaa buuxin kara fiber-ka muraayadda ee dusha sare, kaas oo door wanaagsan ka ciyaara ka hortagga dabka iyo wareejinta kulaylka.
2. Qaab dhismeedka birta wuxuu leeyahay saameyn dhawaaqa oo gaar ah.Qaab dhismeedka birta ayaa ka hortagi kara maqalka lagu kala qaado hawada iyo saameynta codka lagu kala qaado kuwa adag.Labada tiir ee gidaarka ah ee leh godadka, gudbinta dhawaaqa adag ayaa si wax ku ool ah loo dhimi karaa.
Intaa waxaa dheer, qaab-dhismeedka birta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa mashaariic dhismo oo kala duwan.Halkan waxaa ah sifooyinka ugu muhiimsan ee qaabka birta.
1.Birtu waxay leedahay xoog sare, miisaan qaabdhismeed fudud, cufnaanta la midka ah iyo adkaanta wanaagsan.
2.Qaab dhismeedka birta wuxuu leeyahay shaabadeyn aad u wanaagsan, waxqabadka farsamaynta iyo waxqabadka alxanka.
3.Iska caabin xoog leh seismic.Haddii aan tusaale u soo qaadano filooyinka, saqafyada guryaha dabaqyada hoose waa inta badan jiirada, sidaa darteed qaab dhismeedka dusha sare ayaa inta badan qaata nidaamka saqafka saqafka ee ka samaysan qaybo dhismeed bir ah oo qabow.Nidaamkani wuxuu leeyahay waxqabad aad u fiican oo aan shoog lahayn wuxuuna iska caabin karaa qiyaastii 8 dhulgariir.
4.Iska caabbinta dabaysha oo heersare ah.Qaab dhismeedka birta ayaa leh faa'iidooyinka miisaanka fudud iyo xoogga sare.Waxa kale oo ay ka hortagi kartaa qallafsanaanta waxayna ilaalin kartaa inta badan dhismayaasha.
5.adkeysi xooganGuryaha leh qaab-dhismeedka birta fudud, lafaha birta ee qaabka birta waxay ka samaysan yihiin ka-hortagga daxalka sare ee galvanized, taas oo kordhinaysa nolosha adeegga ee qaabka birta.
6.Isla mar ahaantaana, alaabta ceeriin ee loo isticmaalo qaab dhismeedka birta ayaa ah kuwa u adkaysta kulaylka, laakiin maaha kuwo u adkaysta dabka iyo caabbinta liidata.